URoborock S7: Ukucoca okuphezulu ngoku ngokukhuhla kwe-ultrasonic | Iindaba zeGajethi
URoborock S7: Ukucoca okuphezulu ngoku ngokukhuhla kwe-ultrasonic
UMiguel Hernandez | 18/04/2021 16:00 | ngokubanzi, Reviews
Izixhobo zokucoca iirobhothi zikhule ngokobungakanani kunye namandla ethu ngokuhamba kwexesha, aqala njengemveliso ngokusebenza okungathandabuzekiyo, ibe yimveliso ekwaziyo ukwenza ubomi bethu bube lula, ngakumbi xa kufikwa kuphawu. URoborock, ingcali kwiirobhothi ezikumgangatho ophezulu ezikrelekrele.
Fumanisa kuthi zonke izinto ezinqabileyo kwaye ukuba umahluko phakathi kwesiphelo sokucoca iirobhothi esihamba phezulu udlula ixabiso, ngaba kuya kufaneleka?
Njengakwezinye izihlandlo ezininzi, nakweli xesha Sigqibe kwelokuba sibandakanye ividiyo kuhlalutyo lwethu, Kuphela kokuba sithathe isigqibo sokwenza ividiyo "ekhethekileyo" apho uya kukwazi ukubona ngaphezulu kokujonga nje okulula, uya kuba neenkcukacha ezichanekileyo kunye nolwazi malunga nokumiselwa kwesixhobo nokunye okuninzi. Ukwenza oku, kuya kufuneka udlale ividiyo apho unokufumana lonke ulwazi olungenakukwazi ukuziphuhlisa ngokwalo ngamagama. Thatha ithuba lokubhalisa kwisitishi sethu seYouTube apho uya kufumana iziqulatho ezininzi kwaye usincede ukuba siqhubeke nokukhula.
1 Uyilo: Uphawu lwendlu
2 Ukucaciswa kobuchwephesha: Akukho nto ilahlekileyo
3 Uhlelo lokusebenza lweRoborock, ixabiso elongeziweyo
4 Iindlela ezahlukeneyo zokucoca kunye nokukhuhla
5 Ulondolozo kunye nokuzimela
6 Izimvo zoMhleli
Uyilo: Uphawu lwendlu
URoborock uqhubeka nokubheja kwinto esebenzayo. Uyilo lwakhe luyabonakala ngokulula kwaye oko kuye kwamenza waneliseka kakhulu phakathi kwabasebenzisi bakhe. Kwaye ke intengiso ezininzi. Zininzi ii-editions ezinoyilo olufanayo, kunye nesicoci esiphakathi phezulu, isixhobo esijikeleze ngokupheleleyo kwaye side sikhatshwa ziimithunzi ezimbini onokukhetha kuzo, mhlophe okanye mnyama. Ewe kunjalo, njengesiqhelo sibheja kwizinto zeplastiki, amaqhosha amathathu oqwalaselo kwiziko langaphambili kwaye Ukusebenzisana kwe-LED okutshintsha i-hue yayo ngokomsebenzi omelweyo.
Ubungakanani: 35,3 * 35 * 9,65 cm
Ubunzima: 4,7 Kg
Sineqweqwe elingasemva elithi xa siliphakamisa lisibonise itanki eliqinileyo kwaye Isalathisi se-WiFi. Emazantsi sine-roller yerabha esembindini, isicatshulwa sayo, ivili elingaboniyo kunye "nomqokeleli" omnye, ngeli xesha elenziwe nge-silicone. Itanki lamanzi kunye nohlengahlengiso lwephedi yokukhuhla ihlala ngasemva. Uyilo olufana nolo lubonwe ukuza kuthi ga ngoku, ewe, umgangatho wohlengahlengiso kunye lIzinto ezenziwayo, ezenza ukuba siqonde ngokukhawuleza ukuba sijongana nemveliso yepremiyamu efanelekileyo. Asifumani kwiphakheji, ewe, naluphi na uhlobo lokutshintsha kwezinto zokucoca.
Ukucaciswa kobuchwephesha: Akukho nto ilahlekileyo
Siya ngqo kumandla okutsala, elinye lawona macandelo athatha isigqibo xa kufikwa kumba wokwahlulahlula olu hlobo lwesixhobo. Akukho nto ingaphantsi AmaPascals angama-2.500 ekhawulezayo ukusenza siqonde ukuba le Roborock S7 izokwazi ukuba nazo zonke iintlobo zobumdaka. Ukugcina le nto uyiqokelelayo, ine-deposit ye-470 milliliters Ikhutshwe phezulu kwaye ine Isihluzi seHEPA inokutshintshwa xa kufuneka njalo.
Sinonxibelelwano lweWiFi ukulawula isicelo sakho, ehambelana ngokupheleleyo ne I-Alexa, iSiri, kunye noMncedisi kaGoogle. Ukuthetha ngoku ngokukhuhla kwe-ultrasonic, sigxila kwinto yokuba sinedipozithi "kuphela" yeemililitha ezingama-300, esiza kuthetha ngazo ngokulandelayo. Kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba iya kuhambelana kuphela neenethiwekhi ze-2,4GHz ze-WiFi ukwandisa uluhlu lokusebenza.
Sinesikhululo sokutshaja esilula esiqhelekileyo, ngesibonakaliso sesimo se-LED kunye nentambo yokuqhagamshela amandla esemgangathweni. Ewe kunjalo, ubuncinci isiguquli sidityanisiwe kwisiseko esibonelela ngokusebenza ngokufanelekileyo malunga nokusetyenziswa.
Uhlelo lokusebenza lweRoborock, ixabiso elongeziweyo
Isoftware yinxalenye ebaluleke ngokukodwa. Uqwalaselo lwayo lokuqala lulula kakhulu:
Khuphela iapp (iOS / Android)
Layita iRoboorock S7
Cinezela amaqhosha amabini asecaleni kweRoborock S7 de kube ukukhanya kwe-WiFi ye-LED (apho itanki eqinileyo)
Ngenisa igama eligqithisiweyo lwenethiwekhi ye-WiFi
Iya kuyicwangcisa ngokuzenzekelayo
Kulula ukufumana iRoborock S7 kwaye isebenze. Kwividiyo yethu uza kubona useto olwahlukeneyo kunye nokuba kunokwenzeka ukutshintsha ulwimi, ucwangcise amaxesha okucoca nokunye okuninzi. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ukusetyenziswa kwayo kuya kusivumela ukuba silawule iimephu zekhaya lethu, silungelelanise amanqanaba amathathu ombane wokucoca, amanye amandla amathathu okukhuhla kunye nokulungelelanisa iindawo esifuna ukuba zicocwe kuzo.
Iindlela ezahlukeneyo zokucoca kunye nokukhuhla
Siqala ngomnqweno, imowudi esiya kuthi siyisebenzise rhoqo kwaye isebenzisa ii-sensors ezahlukeneyo ze-LiDAR ukuthatha ithuba lokusebenza:
Imowudi cwaka: Imowudi yokusetyenziswa ephantsi ezisa isixhobo kufutshane neeyure ezintathu zokuzimela.
Imowudi yesiqhelo: Imowudi eya kuvumela isixhobo ukuba silungelelanise ngokuzenzekelayo amandla okutsala ngokusekwe ekufumaneni ukungcola kunye neekhaphethi.
Imo yeTurbo: Into enamandla ngakumbi kwaye enengxolo, ngakumbi kucetyiswa xa kukho ubumdaka obukhulu kunye nenkunkuma.
Imowudi ephezulu: Isebenzisa i-2.500 Pa yamandla, enengxolo egqithisileyo kwaye singathi nokuba iyacaphukisa, ewe, ngekhe kubekho bumdaka obuchasayo.
Malunga nokuziphatha kweRoborock S7 kunye iikhaphethi Sinokuhlengahlengisa phakathi kwezinto ezintathu onokukhetha kuzo: Yiphephe; Ukwenza iRamming kunye nokwenza ukuba kungasebenzi iscrubing; Yandisa amandla okutsala xa kufunyenwe. Ndihlala ndibheja kuhlobo lwamva nje kwaye ukusebenza kuye kwabalasela.
Zininzi iindlela onokukhetha kuzo ngokukrola i-ultrasonic oku kusothuse ngokuchanekileyo ukuba isebenza njani. Kakhulu kangangokuba sinokuyicebisa nkqu neparquet okanye imigangatho yeplanga, into ebikade ibeka umngcipheko kwizixhobo ezifanayo kude kube ngoku. Iya kushukuma kaninzi ukuya kuthi ga kumaxesha angama-3000 ngomzuzu. Konke oku kukude kukhukululwe ngesandla ngokwemigangatho yeceramic, kodwa ngokoluvo lwam kwanele ukugcinwa kwemihla ngemihla kwedesika, ewe, ulibale ngokuhlikihla ukungcola okwaziwayo.
InentengisoIdama elinemililitha engama-300 apho sifuna ukukhumbuza, awunakho ukubandakanya iimveliso zokucoca, uphawu uqobo lubonisa ukuba lunokuchaphazela kakubi amandla emveliso.
Ulondolozo kunye nokuzimela
Njengoko usazi kakuhle, esi sixhobo sinesalathiso sesondlo kwisicelo saso. Ngenxa yoku kufuneka sikuthathele ingqalelo oko Isihluzi seHEPA siyahlambeka kwaye siyakufuna ukubuyisela izinto ezisetyenziswayo kwisithuba seenyanga ezintandathu. Ngendlela efanayo, ucoceko luya kucwangciswa ngoluhlobo:
Ibrashi ephambili: Veki nganye
Ibrashi esecaleni: Ngenyanga
Isihluzi seHEPA: Rhoqo emva kweeveki ezimbini
Indwangu yokukhuhla: Emva kokusetyenziswa ngakunye
Abafowunelwa kunye nabenzi boluvo: Ngenyanga
Malunga nokuzimela, Iya kwahluka phakathi kwemizuzu engama-80 kunye nemizuzu engama-180 ngokuxhomekeke kwinani lemisebenzi, oku kuya kunceda ukucofa i-5.200 mAh ukusuka kwibhetri yakho ukuya kwelona liphezulu.
Ngokucacileyo le Roborock S7 izalisekisa phantse yonke into ethenjisiweyo, into enokulindeleka kwimveliso ye-549 (AliExpress). Ukukhuhla kusekude nokukhuhla kwendabuko kumaphupha e-ceramic, nangona kunjalo, ukucoca kunye nokusebenza kwayo okuhamba nesicelo esinzima kunceda kakhulu ukuba ube ngomnye wezinto ezimbalwa zokucoca iirobhothi ezenza ukoneliseka ngakumbi kuneentloko. Ngokucacileyo asijonganga nemveliso ekumgangatho wokungena, ke ukufunyanwa kwayo kuya kufuna ukulinganisa iimfuno zethu.
Ithunyelwe nge: 18 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 17 April 2021
Isicelo esifanelekileyo nesigqibeleleyo
Amandla okutsala aphezulu kunye nokusebenza ngokucoceka
Ukukhuhla okwaneleyo kulondolozo lwepallet
Ukuzimela okwaneleyo kumakhaya angama-90 m2 Aprx.
Ayibandakanyi izinto ezisetyenziswayo ekupakisheni
Ngamanye amaxesha ayidluli kwizikhewu ezimxinwa
Ingxolo enkulu kumagunya aphezulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » URoborock S7: Ukucoca okuphezulu ngoku ngokukhuhla kwe-ultrasonic
Isamsung Odyssey G7: esweni kakhulu yokudlala
Eyona midlalo yechess ilungileyo kwiPC